အွန်လိုင်း Infographic မီးစက်၊ ကိရိယာများနှင့်ပလက်ဖောင်းများ
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 28, 2015 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 5, 2021 Douglas Karr
အဆိုပါ infographics စက်မှုလုပ်ငန်းပေါက်ကွဲနေသည် ယခုကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ကိရိယာအသစ်အချို့ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ လက်ရှိတွင် infographics အေဂျင်စီများသည်ထူးခြားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသန၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၂ မှ ၅ ဒေါ်လာကြားတွင်ရှိသည်။
ဤကိရိယာများသည်သင်၏ infographics ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာ၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်နှင့်ထုတ်ဝေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေလိမ့်မည်။ အချို့ကသင်၏ infographics အားမည်မျှကောင်းမွန်စွာဖြန့်ဖြူး။ တိုးမြှင့်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အစီရင်ခံခြင်း module များပါဝင်သည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာနည်းနည်းလေးငယ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ကအချို့သော buggies ကိုကိုင်တွယ်ရပေမည်၊
သင်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စာရင်းဇယားများ၏ထိုင်ပုံပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးဇယားကွက်များစွာကို infographic ထဲသို့ဆွဲဆောင်ရန်သွေးဆောင်ခံရနိုင်သည်။ ဒါက infographic အတွက်မဟုတ်ပါဘူး၊ Excel အတွက်ပါ။ infographic တစ်ခုသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုမည်သည့်အရာကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်ရှင်းပြရန်သင်ရှာဖွေနေသည်ကိုတိကျသောရည်မှန်းချက်ဖြင့်ဗဟိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိသင့်သည်။ သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုသည်အသုံးပြုသူအားဇာတ်လမ်းမှတဆင့်လမ်းလျှောက်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ infographic သည်အားလုံးကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ရန်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အဆုံးသတ်သင့်သည်။
Easel.ly - အွန်လိုင်းအမြင်အမြင်များကိုဖန်တီးပြီးမျှဝေပါ
IBM ကအတော်များများမျက်စိ - သင်၏အချက်အလက်များကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသူများကိုသင်၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဝေမျှပါ။ ထောင်နှင့်ချီသောလူစုလူဝေးနှင့်အကြံဥာဏ်များဖလှယ်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလေးစားဆုံးကုမ္ပဏီများမှသင့်အားယူဆောင်လာသည်။ ပြီးတော့ ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သည်။
စားပှဲ - သင်၏အချက်အလက်များကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမြင်ယောင်ပြီးမျှဝေပါ။ အလကား။
Infogram - ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ infographics အတွက်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခင်းအကျင်းများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်နာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုသာရွေးပါ။
အဆိုပါဂရပ်စိတ်ထဲ - အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရှိသည့်ပိုစတာများ၊ ဆောင်းပါးများနှင့်တင်ပြချက်များကိုဖန်တီးပါ။ သူတို့၏စာကြည့်တိုက်တွင်သိပ္ပံနည်းကျသရုပ်ဖော်ပုံ ၃၀၀၀ ကျော်နှင့်အဆင်သင့်လုပ်ရန်သတင်းအချက်အလက်ပုံစံများပါဝင်သည်။
Piktochart - Piktochart သည် infographics ဖန်တီးမှုကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သောပထမဆုံးသော web application များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာဒီဇိုင်းမဟုတ်သူများ / ပရိုဂရမ်မာများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရင်း / အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပျော်စရာကောင်းသောစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောနည်းစနစ်များဖြင့်ပညာပေးရန်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသတင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
Venngage Venngage သည်သင့်အားစိတ်ကြိုက်ရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးရန်နှင့်ထုတ်ဝေရန်၊ သင်၏ကြည့်ရှုသူများနှင့်ထိတွေ့ရန်နှင့်သင်၏ရလဒ်များကိုခြေရာခံရန်ကူညီသည်။ Venngage သည်စျေးကွက်သမားများနှင့်ကြေညာသူများအတွက်အစဉ်အဆက်အားကောင်းသော infographics ထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
Visme ၎င်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောတင်ဆက်မှုများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဝက်ဘ်အလံများနှင့်ကာတွန်းတိုများကိုဖန်တီးရန်အတွက်အသုံးပြုသောအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Visme အသုံးပြုသူများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တင်းပလိတ်များ၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုမှစတင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အလွတ်ကင်းဗတ်စကတ်မှ အစပြု၍ သူတို့၏အကြောင်းအရာများကိုအပြည့်အဝကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖန်တီးနိုင်သည်။
Infographics ကိုသင်၏ iOS device မှပင်ယခုပင်လုပ်နိုင်သည် Infographic ထုတ်လုပ်သူ.
ထုတ်ဖော် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအစီအစဉ်အချို့နှင့်ဆက်နွယ်ပြီးဤဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးတွင်လင့်ခ်များကိုအသုံးပြုနေသည်။
Tags: တစ် ဦး infographic ဒီဇိုင်းအိမ်ရှင်မီးစက်မင်္ဂလာပါအင်ဖိုဂရမ်infographic ဒီဇိုင်နာinfographic မီးစက်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လုပ်သူသတင်းအချက်အလက်ပလက်ဖောင်းinfographic တင်းပလိတ်များiographic သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လုပ်သူစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographicsအွန်လိုင်းမီးစက်ချစ်သူtools တွေငရုတ်သီးvisme
Flop သည်နည်းပညာနည်းနည်းနှေးနှေးမဟုတ် ... er Flop!
မေလ 28, 2012 မှာ 12: 56 pm တွင်
စာရင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကသည် စာသားထက် အမြင်အာရုံပို၍ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲလာသောကြောင့် ၎င်းသည် သေချာပေါက် အဆင်ပြေသည်။
မေလ 28, 2012 မှာ 6: 55 pm တွင်
သဘောတူသည် @valerie_keys:disqus ! infographics ကျွမ်းကျင်သော ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကို ငှားရမ်းခြင်းသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်များစွာ၏ လက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။ ဤအရာများသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းကောင်းများဖြစ်သည်။
၂ ချမ်းသာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
မေလ 28, 2012 မှာ 7: 34 pm တွင်
ဒီမှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ဖတ်ပြီးပြီ။
ပြန်လည်လည်ပတ်ရန် သေချာပေါက်မှတ်သားထိုက်သည်။ မင်းဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့လဲ ငါအံ့သြတယ်။
ဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့ သတင်းပေးဆိုဒ်မျိုးဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက်ပါ။
28:2014 pm တွင်စက်တင်ဘာ 8, 53 မှာ
Douglas ကို ကောင်းကောင်းရေးပြီး Visme ကို မှတ်သားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထပ်ပေါင်းပြောရလျှင် Visme သည် infographics ထက်ကျော်လွန်သွားသည် ။ ဖန်တီးဖို့ တော်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကာတွန်းနှင့် တင်ဆက်မှုများ အပါအဝင် မည်သည့် ရုပ်ထွက်အကြောင်းအရာမဆို။